नायिका पुजालाई स्वस्तिमा व्यंग “२० लाख लिएसी ५० लाखको दर्शक तान्न सक्नु पर्छ “ – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/नायिका पुजालाई स्वस्तिमा व्यंग “२० लाख लिएसी ५० लाखको दर्शक तान्न सक्नु पर्छ “
नायिका पुजालाई स्वस्तिमा व्यंग “२० लाख लिएसी ५० लाखको दर्शक तान्न सक्नु पर्छ “
पछिल्लो समय चलचित्र क्षेत्रमा कलाकारले मोटो रकम लिएको चर्चा सधै नै आइरहेको हुन्छ । कलाकारको पारिश्रमिक कै कारण पूराना निर्माताहरुले चलचित्र निर्माण गर्ने आट गर्न सकेका छैनन् । कलाकारको भनाइलाई मान्ने हो भने, उनीहरुले एउटै चलचित्रबाट ५० लाखसम्म पारिश्रमिक वुझ्ने गरेका छन् ।नायिका स्वस्तिमा खड्काले भने आफू पारिश्रमिकको बिषयमा हल्ला नगर्ने बताउँछिन् । उनले आफूले नभनेकै कारण आफूले लिएको पारिश्रमिकको चर्चा नहुने बताइने ।
स्वस्तिमा आफूले पारिश्रमिक भन्दा पनि क्यारेक्टरमा विशेष ध्यान दिने बताउँछिन् । उनले अगाडि थपिन्–‘मलाई पारिश्रमिकले कुनै अर्थ राख्दैन । मेरो लागि जहिले पनि पहिलो नम्बरमा क्यारेक्टर र टिम नै हुन्छ । क्यारेक्टर र टिम राम्रो छैन् भने जति पैसा पाए पनि गर्दिनँ ।’अहिले आइरहने कलाकारको पारिश्रमिकको समाचारको विषयमा पनि उनले बोलेकी छिन् ।
उनले भनिन्–‘कलाकार र निर्माताको कुरा मिलेर महंगो पारिश्रमिक लिनुभयो भने त त्यो राम्रो कुरा हो नि । तर, तपाईले २० लाख लिनुहुन्छ भने ५० लाख फिर्ता गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । २० लाख लिने अनी निर्माताको हातमा ५ लाख मात्र पर्यो भने त त्यो नमज्जा हुन्छ नि त ।’स्वस्तिमाको यो भनाइसँगै चर्को पारिश्रमिक लिने कलाकारमाझ तरंग उत्पन्न भएको छ ।
सलमानको अब बन्ने चलचित्र दबंग ३ को पनि चर्चा चल्न थालेको छ । यस फिल्ममा टेलिभिजनकी ‘नागिन’ मौनी रोयको पनि विशेष भूमिका रहनेछ । मौनी रोय ‘दबंग –३’ मा सलमानका साथ उनकी प्रेमिकाको भूमिका निर्वाह गर्नेछिन् ।यस अघिको फिल्ममा झैँ सलमानलाई चुलबुल पाण्डेको रुपमा प्रस्तुत गरिने भएकाले यस अघिकै कहानीसँग जोडेर फिल्म निर्माण गरिने छ।
फिल्ममा मौनी रोयको भूमिका छोटो समयको लागि मात्रै हुनेछ । मौनी चलचित्रमा झण्डै २० मिनेट मात्रैका लागि देखिनेछिन् । अरबाज खानद्वारा निर्माण गरिने यस फिल्मको काम जुन महिनादेखि सुरु गरिनेछ ।टेलिभिजनकी अभिनेत्री मौनी रोय अक्षय कुमारको फिल्म ‘गोल्ड’ मार्फत बलिउडमा डेब्यू गर्दैछिन् । फिल्म ‘गोल्ड’ यो वर्षको अगष्टमा प्रदर्शन हुनेछ ।साथै आलिया भट्ट र रणवीर कपूर अभिनित फिल्म ‘ब्रम्हस्त्र’ मा पनि मौनी रोयको अभिनय रहनेछ । निर्देशक अयान मुखर्जीद्धारा निर्देशित यस फिल्ममा मौनी नकारात्मक भूमिकामा देखा पर्नेछिन् ।
अभिनेत्री ऋचा शर्माको आज जन्मदिन, कति वर्ष पुगिन् ?
बहुचर्चित नायिका रेखा थापाको आज जन्मदिन, शुभकामना दिनेको ओइरो
अभिनेत्री रीमा विश्वकर्मारको बिहे !
अनमोल र सुहानाको ‘ए मेरो हजुर ३’ले युट्युबमा गर्यो कमाल, २४ घण्टा नबित्दै ट्रेन्डिङको शीर्ष स्थानमा
५/७ बर्ष भइसक्यो राम्रोसँग नसुतेको , कस्को सामु गएर आँसु झारौं : ज्योती मगर